के भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsके भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा ?
के भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा ?
संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाएर उठ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस फिर्ता हुन पनि सक्ने संकेत गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले जति प्रयास गर्दा पनि नभएको भन्दै ताजा जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लेख्न मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएपछि केही मन्त्रीले ‘त्यसो नगरौं’ भनेका थिए । प्रदिप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले ‘अझै सहमतिको पहल गरौं भन्दै संसद विघटनमा नजान आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले अझै सहमतिको लागि प्रयास गर्ने बताएका थिए ।
‘अझै पनि सहमतिको सबै बाटो बन्द भएको छैन, म फेरि पनि प्रयास गर्छु, छलफल गर्न सकिन्छ’ उठेर हिँड्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । त्यसलगत्तै शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार फर्केर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पुनः छलफल गरेका थिए । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमै रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संसद विघटनको सिफारिसको समर्थन वा बिरोध केही पनि नगर्ने प्रतिक्रिया दिनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले पनि नेकपामा हुनसक्ने पछिल्लो निर्णय कुरेरमात्र कदम चाल्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपति समक्ष पुगेको सिफारिस अहिले बिचाराधीन अवस्थामा रहेको एक सल्लाहकारले बताए । यसैबीच तत्कालीन माओवादीतर्फका केही मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
Previous articleराष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन
Next articleसंसद विघटन : आमचुनाव २०७८ वैशाख १७ र २७ गते